Shiinaha raaxada kor u qaadista eey quudinta baaquli quudinta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah (A) soosaarayaasha iyo alaableyda | Shengrui
raaxo qaali ah kor u qaad weel quudinta qunyar socodka saxanka biyaha (A)
Maaddada badeecadani waa birta Kaarboon / Bir aan xadi lahayn
Nidaamka aan isticmaalno waa Laser Cut
Cabirka, waxaan leenahay cabir caadi ah waxaanan soo dhaweynaynaa cabbirka la habeeyay
Naqshadeynta qaabaysan iyo astaanta ayaa sidoo kale la heli karaa
Baakadaha, waxaan u isticmaalnaa sanduuqa bunni ama sanduuqa midabka ah sida aad doorato.
Ku habboon cunista cuntada eeyo iyo bisado cabbirkoodu kala duwan yahay. Looma baahna inaad iibsato fijaanno badan oo xayawaan ah oo dherer kala duwan ah mar dambe.
Laba Ey Ey: Waxaa jira 2 fijaan oo bir bir ah oo laga saari karo, fudud oo la dhaqi karo & keenso ikhtiyaar ku habboon eeyaha inay wax cunaan waxna cabaan isla waqtigaas. uma baahnid inaad hoos ugu dhacdo gacmahaaga iyo jilbahaaga si aad u nadiifiso goobta quudinta.
Deegaanka Quudinta Kaamil ah: Baaquli bir bir ah oo la hakiyay, waxay bixisaa jawi quudin oo nadiif ah. Noocan ah saxanka eeyga kor loo qaaday wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista dhaqdhaqaaqa cuntada, min afka ilaa caloosha, dhererka raaxada leh wuxuu yareynayaa cadaadiska qoorta eeyga markii uu wax cunayo.
Muddo Dheer: Waxyaabaha birta ah ee birta ka sameysan ayaa ka adkeysi badan kana adag qalabka kale sida bamboo, muddo dheer loo isticmaali doono.
Hore: Hal-hayska Khamriga Halbeegga ah ee Joometriiska.
Xiga: Furaha birta Rack & Dog Leash Hanger
Furaha birta Rack & Dog Leash Hanger
Bacda saxarada eey bixiyaha saldhigga qashinka xayawaanka birta ah ...